Fetibe Iray Vaovao Ao Madhya Pradesh, Mamelona Indray ny Kolontsaina iray Efa Verin’ireo Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2017 17:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, русский, English
Ny fetibe Rani Kajal Mata, Pikantsary avy amin'ny YouTube.
Nosoratan'i Sangeeta Rane ity lahatsoratra ity ary nipoitra voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanana vondrom-piarahamonin'ireo media ao India efa nahazo loka iraisampirenena. Ny dika navoaka eto ambany dia ampahany amin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
An'arivony maro ireo olona nifamory tao amin'ny vohitr'i Verwada ao amin'ny distrikan'i Barwani hankalazàna ilay fetibe tena mbola vaovao tao Madhya Pradesh –ny fetiben'ny Rani Kajal Mata, andriamanitra fahagolan'ireo vahoaka vazimba. Ilay andriamanitra, vatolampy iray masina, dia mpiaro ilay andriamanibavin'ny Foko Pata monina ao Barwani, ny farany avaratra indrindra amin'ilay distrikan'ny fanjakàna Indiana ao Madhya Pradesh, manamorona ny Rajasthan.
Io no fotoana voalohany indrindra nisianà fetibe iray, natao hankalazàna ireo andriamanibavy sy amin'ny fomban'ireo vazimba teratany, fetibe iray nokarakarain'ny Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, fikambanana iray tsy mitady tombony ara-bola miasa ho an'ny fiadanan'ireo Adivasis na ireo foko. Mba handraisana anjara amin'ilay fetibe, andiany nahitàna vazimba teratany niisa 5.000 avy amin'ny manodidina an'i Barwani sy ireo distrika manakaiky azy no tonga niaraka. Rani Kajal Mata dia ilay mpiaro ny foko iray fahagola tao Madhya Pradesh. Aminy no mivavaka ilay vondrom-piarahamonina rehefa mandalo fotoana maha-ory.
Nahoana ireo foko mponina ao Barwani no miantso ilay mpiaro azy ireo amin'izao fotoana izao? “ Verinay ny voa maha-vazimba teratany anay. Nanjavona ireo rano sy ala mikitroka nanànanay,” hoy i Bilatibai avy ao amin'ny vohitr'i Verwada ao Barwani. Mitombina ny ahiahin'i Bilatibai sy ny vondrom-piarahamonina misy azy, ary notohanan'ny fanadihadiana iray izay mametraka ireo Barwani any amin'ireo distrika izay “tena faran'izay marefo dia marefo” manoloana ny fiovàn'ny toetrandro, indrindra indrindra manoloana ny resaka fahazoana rano. Mampiantrano ny 14,69 isanjaton'ny Adivasi na ireo vahoakan'ny foko ao India i Madhya Pradesh, izay manome 104 tapitrisa manerana ny firenena.
Barwani, voalohany indrindra dia distrikam-poko iray, mitoetra ao amin'ilay lohasaha ikorinan'ny renirano Narmada. Toeram-ponenana midadasika fipetrahana tao amin'ny distrika ary ala maro no tototry ny rano noho ny fanorenana ny tohodranon'i Sardar Sarovar — iray amin'ireo tohodrano avo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny, lazain'ity tatitra ity fa marobe dia marobe ireo vohitra foko tanàla no difotra tanteraka ao anatin'ireo ranoben'i Narmada, niteraka famindràn-toerana ireo vondrom-piarahamonina tao an-toerana sy namotika ny saha maitso màvana nandrakotra io faritra lasa karankaina io. Asehon'ilay fanadihadiana ihany koa fa niteraka fihandronan'ny rano ireo tohodrano manemitra ilay renirano, nahatonga azy hasirasira sy hanakana ny fizotra voajanaharin'ny natiora izay mametraka ireo singa mahalonaka tokony hijanona eny amin'ny morona. Tsy mety amin'ny fitarihana rano ary mahatonga ny tany fambolena ho tsy mamokatra ilay rano masirasira sy alikalinina. Tena nandona mafy tokoa ireo vondrom-piarahamonina tao amin'ilay faritra io, izay ny fambolena no asa fivelomany voalohany indrindra.
Ilay mpifandray amin'ny Video Volunteers, Pawan Solanki, izay ny foko nisy ny fianakaviany ihany koa dia isan'ireo nafindra niala tamin'ny tranony teny amoron'ny renirano Narmada, miteny hoe :
Miankohoka manome voninahitra ny natiora sy ireo singa ao aminy ho toy ny andriamanitra kely ny kolontsainay. Rehefa nandeha ny fotoana, nosoloinay tamin-javatra hafa ireny andriamanitra ireny ary adinonay ny lanjan'ny natiora teo amin'ny fiainanay. Saingy miankina amin'ny tontolo iainana izahay amin'ny resaka sakafo, fivelomana ary fialofana.
Pawan Solanki nandefa ity tatitra anaty lahatsary ity ho an'ny Video Volunteers:
Araka ny tatitr'i Pawan, raisin'ireo Adivasis ho mpiaro azy ireo i Rani Kajal Mata, mivavaka amin'ilay Andriamanibavy mba hiatrika ireo zava-maha-ory, ary hangataka valiny momba ireo olana manjo azy ireo.
Ao anatin'ilay fetibe sy amin'ny fiantsoana ilay Andriamanibavy Rani Kajal Mata, ireo antipanahy ao amin'ny Barwzni dia te-hampahatsiahy ireo andian-taranaka tanora aty aoriana momba ny fiankinan'izy ireo amin'ny natiora sy ny ilàna ny fiarovana azy io. Ezaka ihany koa io hanomezana aina vao indray ny tolona hameranana ny jaal (rano), jungle (ala), zameen (tany).
Tamin'ny alàlan'ny fihiràna, vitan'ireo razambentsika ny nitondra rano ho an'ireo tany maina. Vita ny nampitsahatra valanaretina tamin'ny alàlan'ny choki (fombafomba) iray. Nahatonga ireo vondrom-piarahamonintsika ho faly sy ravo ireny zavatra tsotra kely ireny.
Efa voavina mialoha ihany ny tebitebin'ilay vondrom-piarahamonina momba ny tontolo iainana, satria ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra, mahantra sy marefo dia tsy maintsy niaritra ny fahasimbàn'ny toetoetry ny tontolo iainana sy ny tsy fahampian'ireo loharanonkarena voajanahary tena iankinan'ny aina.
Tsapan'ireo zokiolona ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny fiantraikan'ny fahasimbàn'ny tontolo iainana naterak'ireo tetikasam-pampandrosoana nanamaina ny fiveloman-dry zareo sy ny mari-panondroana azy ireo. Voafandrika anaty kiboriborin'ny kere sy ny trosa ireny vondrom-piarahamonina ireny. Vokany, voatery mifindra monina manerana ny firenena ireo andian-taranaka tanora, mazàna manao asa mampididoza sy zara raha misy karama. Ny fifindramonina fotsiny aza dia efa nitelina ny mari-panondrana maha-izy ny foko tsirairay, nanaisotra ireny olona ireny hiala tamin'ny fomba fiaina maharitra nahazatra azy ireo.
“Noho ny fifindràmonina, lasa mamonjy tanàandehibe ireo rahalahinay sy anabavinay ary dia mamoy ny reharehany maha-izy azy ireo. Heverin-dry zareo fa manambany azy ny maha-foko azy,” hoy i Pawan. Amin'ny alàlan'ny zavakanto sy kolontsaina no ankalazàn'ilay fetibe io mari-panondroana tsy manan-tsahala io, ary tantarain'ny olona ireo tantara izay itarafana ny lovantsofina ifampitàn'ny andian-taranaka, dia tononiny ireo vavaka iantsoana ireo andriamanitra fahagola.
Araraotin'ireo olona an'arivony avy amin'ireo vohitra isankarazany manerana an'i Barwani ihany koa ilay fifamoriana mba ho toy ny ambohipihaonana, dia ireo olona mitolona ho an'ny zony ao anatin'ilay hetsika ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana, Narmada Bachao Andolan (Hetsika Vonjeo i Narmada ). “Tonga eto hihaona mandritra ny andro telo ny olona. Mivondrona sy miresaka tetikady vaovao ry zareo, mifampianatra momba ireo vahaolana vaovao avy amin'ny tsirairay ary mianatra momba ireo fivoarana amin'ny ankapobeny,” hoy i Pawan. Raha navitrika tamin'ny hetsika ireo zokiolona, nilefa kosa ny fahalinan'ny tanora amin'ilay hetsika. Mba hisintonana tanora misimisy kokoa hirotsaka an-tsehatra amin'ny tolon'ilay vondrom-piarahamonina, tsapan'i Pawan ho toy ny teboka iray fiaingàna ho fiarovana sy hitahirizana ny tontolo iainana ity fetibe ity ary araka izany, dia ny mari-panondroana azy ireo manokana.
Avy amin'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika ao India no fiavian'ireo mpifandray amin'ny Video Volunteers, ary mamokatra lahatsary momba ireo tantara tsy misy mpitatitra. Ireny tantara ireny dia “vaovao atolotr'ireo izay miaina azy,” manome tontolo tena tsy misy fangaro avy eny an-toerana ho fandrakofana ireo fanambin'ny resaka zon'olombelona sy fampandrosoana.